रक्सी सेवनका असर र त्यसकाे उपचार बिधि - रक्सी सेवनका असर र त्यसकाे उपचार बिधि
रक्सी सेवनका असर र त्यसकाे उपचार बिधि
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २८ माघ, 06:41:42 PM
नेपालका गाउँघर र शहरमा जथाभावी बनाइएका र बेचिने गरेको धेरैजसो खुला रक्सीमा अति विषाक्त (टक्सिक) र घातक तत्व हुन्छन् । जथाभावी बेचिने यस्तो रक्सी फालिएको जुठो–पूरो, कुहिएको अन्न, नौसादर आदि र रासायनिक (युरिया) मल पनि हालेर बनाएको पाइन्छ । केही वर्षअघि ललितपुरको पाटनढोका नजिकका एक व्यापारीले एकदमै पुरानो टफी (चक्लेट) को डुङ्गुर थुपारेको टीभीमा देखाइयो । थुपारिएको ठाउँबाट स–साना छात्रछात्राले फेला पारेर खाँदा निकै बिमारी भएपछि यसको सोधखोज भयो । निज व्यापारीले सडेको चक्लेटबाट ‘रक्सी बनाएर बजारमा बेच्न पठाउने’ बताएका थिए । यस्ता विषाक्त रक्सी पिएर मानिसको मृत्यु भएको, अन्धो वा बेहोस भएकाजस्ता घटना र समाचार बारम्बार सुन्नमा आइरहन्छ । जर्किनमा हालेर शहरमा जथाभावी बेच्नेगरेको विषालु रक्सी स्वास्थ्यको लागि अति नै घातक र खतरनाक छ ।
रक्सीले तत्कालिन रुपमा दिमागको कार्यप्रणालीलाई सुस्त बनाइदिन्छ, त्यसैले चेतना, विवेक र होशलाई खल्बल्याउँछ । पाचन प्रणाली, कलेजो र पेट खराब गर्नाले वान्ता हुने कारण बन्छ । एक मिनेट पनि बेवकुफ तरिकाले रक्सी खायो भने भोलिपल्ट दिनभरि नै शरीर खराब गरिदिन्छ । राम्रो गुणस्तरीय भनिएको रक्सी पनि मानिस हेरी असर गर्ने मात्रा फरक हुन्छ । हप्तामा ६० मिलिग्राम (सानो एक पेग) राम्रो रक्सीले स्वास्थ्यलाई फाइदै हुन्छ । उमेर, लिंग, शरीरको कद, मोटोपन र कति मात्रा कति समयभित्र पिएको हो, रक्सीको असर यी कुरामा निर्भर रहन्छ । नाम चलेका ब्राण्डको नक्कल गरिएका रक्सीहरूको पनि भरमार उपभोग छ । प्रायः बिहे आदिको भोजमा राखिने गरेका यस्ता नक्कली ब्राण्डवाला रक्सीबाट सावधान हुनु जरुरी देखिन्छ ।
कहिलेकहीँ जमघट र पार्टीमामात्र पिउने मान्छेलाई ‘सोसल ड्रिकर’ भनिन्छ भने पाएपछि अनियन्त्रित मात्रामा पिउनुलाई ‘बिन्ज ड्रिङ्किङ्’ भनिन्छ । ‘बिन्ज ड्रिङ्कर’लाई रक्सीको विषाक्तताले बढ्ता असर गर्छ । यस्ता मानिसहरू एकैपटकमा जुनसकै रक्सी वा पेय लिन्छन्, जसबाट ‘ककटेल’ (रन्थनाहट) पनि हुन्छ । अघिल्लो रात पिएको रक्सीले भोलिपल्ट टाउको दुख्दा कसैले टाउको दुखेको औषधी वा कसैले अलिकति रक्सी नै खानेगरेको देखिन्छ । यो एकदमै गलत तरिका हो । रक्सी एकदमै बढी जलअल्पता (डिहाइड्रेसन) उत्पन्न गर्ने वस्तु हो, जसको तत्काल असर दिमागमा परेको हुन्छ । जलअल्पता भयो भने टाउको दुख्ने, रिँगटा लाग्ने, आँखाको हेर्ने क्षमतामा असर पर्ने, डकार आउने, वाकवाकी लाग्ने, वान्ता पनि हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने र मांसपेशी तथा शरीर शिथिल हुनजान्छ । यस्तो बेलामा शरीरको तापक्रम घटेर ‘हाइपोथर्मिया’ हुनसक्छ । शरीरमा पानीको मात्रा बढाउनुपर्नेमा जलअल्पताले दिमागमा असर परेर टाउको दुखेपछि टाउको नदुख्ने औषधी खानु त दिमागको असर कायमै राखेर झन् औषधीको असर थोपर्नु हो ।
रक्सीको सेवन बढ्दैजाँदा सिरोसिस (कलेजोको रोग), क्षयरोग (टीबी), अल्सर लगायत पेटका विभिन्न रोग, मिर्गौलाको खराबी, ग्यास्ट्रिक, पेटको अल्सर, रगतको अल्कोहलकरण (अल्कोहलाईज), मस्तिष्कघात आदि अनेक रोग पैदा हुन्छन् । रक्सीले गर्दा नै कलेजो, पेट, छाती, मुख, माथिल्लो घाँटी, अन्ननली, कण्ठनली आदि ७ ठाउँमा त्यति नै प्रकारका क्यान्सर लाग्ने सम्भावना एकदमै बढेर आउँछ । त्यसमा पनि चुरोट र रक्सी एकसाथ सेवन गर्ने मानिसलाई त घाँटी र मुखको क्यान्सर हुने सम्भावना झन् बढी हुन्छ । साथै स्मरण शक्ति र सिर्जनशीलता गुम्ने, मानिस शंकालु हुने, कसैमाथि पनि विश्वास नहुने, जिम्मेवारीको भावना लोप हुँदैजाने जस्ता बुद्धि र विवेकजन्य पक्षमा गम्भीर ह«ास आएको देखिन्छ । अनेकौँ अपराधमा संलग्न हुने काममा रक्सी सेवनले ज्यादा प्रवृत्त गराउन सक्छ । रक्सी चित्तलाई उदास बनाउने (डिप्रेसेन्ट) वस्तु हो । यसले केन्द्रिय स्नायु प्रणाली र दिमागको कार्यक्षमता र प्रणालीलाई झन् मन्द गराइदिने हुनाले असरहरू धेरैतिर फैलिएर जान्छन् ।
‘फोलेट’ नामक अत्यन्त महत्वपूर्ण भिटामिन, जसले नयाँ–नयाँ डीएन्ए तत्व, पैदा गर्छ रक्सी पिउनेहरूमा फोलेट न्यूनमात्रामा रहेको हुन्छ । रगतमा फोलेट तत्वको न्यूनमात्रा हुनु भनेको क्यान्सरको सम्भावना बढ्नु हो । नियमित तथा अधिक रक्सी पिउने मानिसलाई क्यान्सरको सम्भावना बढ्ने कारण यही हो । रक्सीको आदत र धेरै मद्यपान गर्ने मानिसलाई ३ कारणले मधुमेह (डाइबिटिज) लाग्न सक्छ:
१. धेरै रक्सी पिइरहने मानिसमा इन्सुलिन उत्पादन गर्ने प्याङ्क्रियाज (अग्नाशय) अंगको संवेदनशीलतामा ह्रास आउँछ,
२. रक्सीले प्याङ्क्रियाजमा लाग्ने बिमारले गर्दा इन्सुलिन उत्पादन घट्छ, र
धेरै रक्सी पिउनाले मानसिक स्वास्थ्य उत्तम बनाइराख्ने दिमागको ‘न्युरोट्रान्समिटर’ तत्वलाई खल्बल्याइदिन्छ । यो तत्वले दिमागको नियन्त्रणमा शरीरको आन्तरिक सञ्चारको काम गर्छ । न्युरोट्रान्समिटर खल्बलिन थालेपछि तनाब बढ्ने, डिप्रेसन र चिन्ताजस्ता मानसिक समस्याको जोखिम बढ्ने हुनजान्छ । रक्सीको लतले बिगारेको मानिसलाई कामकाजी मानिसउपर अविश्वास, आफ्नै लघुताभास र मनोबलको अभावले भद्र मानिसको जमघटमा उपस्थित हुनबाट भगाउँछ । धेरै रक्सी पिउनेमा निर्लज्जता, अनैतिकता बढ्नुको साथै मानसिक स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर देखापर्छन् । परिणामस्वरुप मानिस आत्महत्या पनि गर्नपुग्छ ।
सामान्यतया मानिसको शरीरले एक युनिट (मानौ एक पेग) रक्सीलाई पाचन प्रणालीको प्रक्रियामा लैजान एक घन्टा समय लिन्छ । तर एक घन्टामा दुई पेग वा बढी रक्सी पिएको छ भने पाचन प्रक्रियाले ठीकसँग काम गर्न छोड्छ । छिटोछिटो रक्सी पिउनेको त झन् दिमागले काम गर्न छोड्दैजान्छ । त्यो बेला बड्ता बोल्ने, बोली र शरीर लरबराउने, रिसाउने, उत्तेजित हुने, बिवेकहीन भएर अस्वाभाविक ब्यवहार देखाउने हुनथाल्छ ।
एक चिकित्सकको हैसियतले तपाईंलाई रक्सी पिउन सल्लाह दिन उचित हुँदैन । तर तपाईं पिउने गर्नुहुन्छ भने त्यसबाट हुने शारीरिक क्षति नियन्त्रणका लागि अपनाउने घरेलु उपायबारे मैले सल्लाह दिनुपर्छ । रक्सी डिहाइड्रेसन गराउने जबरजस्त कारण भएकोले रक्सी पिउनुभन्दा कम्तिमा एक घन्टाअघि र रक्सी पिएको १ घन्टापछि फलफुलको रस, प्रशस्त पानी पिउनु बेस हुन्छ । साँझ रक्सी पिएको छ भने पेट बिग्रने सम्भावना घटाउन भोलिपल्ट बिहान एउटा स्याउ, स्ट्रबेरी वा ‘बेरी’ प्रजातिका फलफुल खानु उत्तम हुन्छ भनी अमेरिकाको ‘द हफिङ्टन पोस्ट’ मा विज्ञान लेखिका क्रिस्टिन् कर्कप्याट्रिकले विभिन्न अनुसन्धानका रिपोर्ट उद्धृत गर्दै लेखेकी छन् । उनका अनुसार, चिकेन् नुडलसुपमा हुने नूनमा लवण र पानीको मात्राले ‘इलेक्ट्रोलाइट’ तत्वको क्षतिलाई ठीक गर्छ, जुन तत्वले शारीरिक क्रियाशीलताका लागि मनोवैज्ञानिक सन्तुलन मिलाउँछ । साल्मोन जातको माछामा हुने ‘भिटामिन बी–६’ र ‘ओमेगा–३’ ले टाउको वा जिउ दुःख्ने समस्या हट्छ । ओमेगा–३ ले मनस्थिति (मुड) ठीक गर्न सहयोग पु¥याउँछ । साल्मोन नपाए पनि हामीकहाँ ट्राउट माछा पाइन्छ । पुदिना वा काँचो अदुवा पिसेर तिल, टिमुर आदि पनि लगाएर बनाएको चटनीले वाकवाकी, डकार, पेट तथा वायुसम्बन्धी समस्या (ग्यास्ट्रिक डिस्ट्रेस) हटाउन रक्सीपछिको खानासँग लिनु राम्रो हुन्छ । रक्सी खाएपछि कम्तिमा २४ घन्टासम्म चिया, कफीजस्ता ‘क्याफिन’युक्त पेय नलिनु उत्तम हुन्छ । तर रक्सीबाट टाढै रहनु सबभन्दा राम्रो हुन्छ ।
२०७५, २८ माघ, 06:41:42 PM
१० हजार बराबरको रक्सी मुसाले पिएपछि……